केएमसीमा नेपालमै पहिलो पटक रोवटिक न्यूरो सर्जरी शुरु : RajdhaniDaily.com
HomeEditor-Picksकेएमसीमा नेपालमै पहिलो पटक रोवटिक न्यूरो सर्जरी शुरु
केएमसीमा नेपालमै पहिलो पटक रोवटिक न्यूरो सर्जरी शुरु
काठमाडौं । काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई सुपरस्पेशियालिटीको हव बनाउँदै नेपालमै पहिलोपल्ट रोवटिक न्यूरो सर्जरी सेवा सुरु गर्ने भएको छ ।
गत वर्षबाट डा. सुनिल शर्माको लगानी र व्यवस्थापनमा आएको काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) ले मुलुकमै पहिलोपल्ट क्रेनियल रोवर्टबाट न्यूरो सर्जरी सुरु गर्ने भएको हो । केएमसीले सार्क राष्ट्रहरुमा भारतपछि नेपालमा पहिलो पटक रोवटिक न्यूरो सर्जरी सुरु गर्न लागेको जनाएको छ ।
काठमाडौं मेडिकल कलेजले पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमै पहिलोपल्ट न्युरो सर्जरीमा एस ८ स्टिल्थ सिस्टम विथ गाइड, एनआईएमएस एक्लिप्स भर्सन ४ अल्ट्रा अपरेटिभ‚ नेभिगेटेड ड्रिल एन्ड एमआईएसएस सिस्टमजस्ता अत्याधुनिक उपकरणहरू खरिद गरी जडानसमेत गरिसकिएको जनाएको छ ।
केएमसीलाई सुपरस्पेशियालिटीका रुपमा विस्तार गर्न नेपालमै पहिलोपल्ट न्यूरो सेवामा अत्याधुनिक उपकरण सहितको सेवा सूचारु गर्न लागिएको अध्यक्ष डा. शर्माले बताए । यो सेवा दक्षिण एशियामा केएमसी अगाडी भारतको बेङ्लोरमा २ वटा अस्पतालले मात्र ल्याएका छन् ।
एस ८ स्टिल्थ सिस्टम विथ गाइड मार्फत न्यूरो सर्जरी गर्दा विरामीको मस्तिष्क तथा मेरुदण्डमा रहेका विभिन्न प्रकारका नसाहरु जोगाउन समेत सहयोग पुग्ने छ । ‘शरीरका कुनैपनि भागहरु चलाउन मस्तिष्कमा बेग्लाबेग्लै नसाहरु हुन्छन् । परम्परागत प्रविधिबाट मस्तिष्कको ट्युमर निकाल्न सर्जरी गर्दा ती नसाहरु काटिनबाट जोगाउन निक्कै चुनौति हुन्थ्यो । पुरै टाउको खोलेर शल्यक्रिया गर्नुपर्दथ्यो ।’ केएमसीका वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. अमित थापाले भने–‘यो पद्दतिबाट न्यूरो शल्यक्रिया गर्दा मस्तिस्कका कुनैपनि भाग तथा नसाहरुमा नोक्सानी नपुर्याइकन ट्युमर निकाल्न सकिन्छ भने, शल्यक्रिया गर्न सानो प्वाल पारेमात्रै पुग्छ ।’
अहिलेसम्म सर्जनहरुले शरीरका भित्री अङगहरु खासगरी मस्तिष्क, मेरुदण्डहरुको सर्जरी गर्ने बेलामा काल्पनिक थ्रिडी बनाएर काम गर्दथे । तर, केएमसीले भित्र्याएको नेभिगेसन सिस्टमले सर्जनहरुलाई थ्रिडी मनिटरमा ट्युमर कहाँ छ, कुन नसा कहाँ छ जानकारी दिन्छ । जुन ठाउँमा ट्युमर छ सर्जनहरु थ्रिडी मनिटरको माध्यमबाट त्यहीँ पुग्न सक्छन् । ठूलो शल्यक्रिया गर्नुपर्दैन ।
यसले मस्तिस्क तथा मेरुदण्डका कुनैपनि शल्यक्रियाहरुको उपचारमा ९५ प्रतिशत सम्म एक्युरेसी हुन्छ । यसअघि अनुमानको भरमा गरिने शल्यक्रियाले ८० देखि ८५ प्रतिशत मात्रै एक्युरेसी दिने गर्दथ्यो ।
केएमसीले ल्याएको रोवर्ट विश्वव्यापी रुपमा न्यूरोलोजी विधामा उपयोग भएको आधुनिक टेक्नोलोजी युक्त हो । क्रेनियल रोवर्टले मस्तिस्कमा पाइपहरु, ट्युव्सहरुलाई जुन ठाउँमा पठाउनु पर्ने हो त्यहीँ फिक्स गरेर पुर्याउँछ । ‘यसले मस्तिष्कको भित्री भागको वायोप्सी गर्दा त्यहाँबाट कुनैपनि मासुको टुक्रा निकाल्नको लागि सहयोग पुग्छ । ट्युमर, छारे रोग, पार्किन्सन गम्भिर प्रकारका रोगहरुको उपचारमा टेवा पुग्ने छ ।’ नशा तथा मेरुदण्ड र हड्डी सम्बन्धी भित्री रोगको उपचारमा सहयोग पुग्ने डा.थापाको भनाई छ ।
केएमसीले भित्र्याएको एनआईएमएस एक्लिप्स भर्सन ४ अल्ट्रा अपरेटिभ इन्ट्रा अपरेटिभ न्यूरो सिस्टम हो । यसले शल्यक्रियाको बेलामा विरामी सुतिसकेपछि उसको कुन दिमागको भागले हात चलाउँछ, कुन भागले खुट्टा चलाउँछ, कुन भागले बोलीमा असर पर्छ ती भागहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सहयोग गर्दछ ।
यो सिस्टमले स्पाइनलको शल्यक्रिया गर्दा स्क्रुहरु कहाँ कसरी गइरहेको छ, अन स्क्रिनमै देख्न सकिने भएकोले शल्यक्रिया गर्ने छेउछाउमा रहेका नशाहरु जोगाउन ठूलै सहयोग पुग्ने डा. थापाको दावी छ । केएमसीमा भित्र्याइएको नयाँ टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दा उपचारमा ९५ प्रतिशत भन्दा बढी सफलता हात पर्ने भनिएको छ ।
केएमसीले इन्ट्रा अपरेटिभ न्यूरो सिस्टमसँगै नेभिगेटेड ड्रिल समेत भित्र्याएको छ । यो हड्डीहरुमा प्वाल पार्न प्रयोग हुने गर्दछ । यो नेभिगेसन सिस्टमसँग जोडिएकोले चिकित्सकहरुले कुनैपनि हड्डीहरुमा प्वाल पार्दा मनिटरबाटै कसरी ड्रिल भइरहेको छ थ्रिडी स्क्रिनमै हेर्न सक्छन् । यो पद्दतिले दुरविनको सहायतामा गरिने विभिन्न शल्यक्रियाहरुमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।